Global Voices teny Malagasy » India : Ireo Mafàna Fo Ambaniana Manadio An’i Mombai · Global Voices teny Malagasy » Print
India : Ireo Mafàna Fo Ambaniana Manadio An'i Mombai
Voadika ny 14 Oktobra 2017 14:33 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Dikasarin'ny lahatsary YouTube avy amin'ny Video Volunteers mampiseho mpiasa mpifindra monina manadio lakandrano maloto any Mombai, India.
Navoaka voalohany  tao amin'ny Video Volunteers, fikambanan'ny vondron'ny haino aman-jery nahazo loka tany India ity lahasoratra nosoratan'i Madhura Chakraborty ity. Misy dikanteny voasoratra avoaka etsy ambany ho fandraisana anjara amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Mpiasa mpifindra monina an'arivony no ampiasain'ny Brihanmumbai Municipal Corporation  (BMC), fikambanana misahana ny fahadiovan'ny tanàndehibe manankarena indrindra any India, hanao fanadiovana mialohan'ny talio isan-taona. Mitaky ny asan'ireo mpiasa mpifindra monina izay matetika miasa tsy ara-dalàna amin'ny fomba fiaina tsy araka ny maha-olona io fanadiovana io, tena hita niharihary izany nandritra ny tondradrano tany Mombai vao haingana teo.
Ny 29 Aogositra, nanimba zavatra be tany Mombai ny oram-batravatran'ny talio, nandrava ny rafi-pitaterana tao amin'ilay an-tanàndehibe goavana izay misy mponina 18 tapitrisa eo ho eo. Manodidina ny roapolony eo ho eo ny olona maty nianjeran'ny trano avo be  iray rehefa nivadika ho renirano ny làlana iray tany amin'ny renivohitra ara-bolan'i India.
Ritra tao anatin'ny andro iray ny ranoben'i Mombai, noho ny ezak'ireo mpifindra monina mpiasa mpanadio nampiasain'ny BMC.
Noho ny tsy fahampian'ny rafitry ny lakandrano maloto araka ny tokony ho izy, dia hita any India ny faharatsian'ny fitandroana ny fahasalamana toy ny fangerena an-kalamanjàna.  Ny saranga farany ambany, Dalita, no manadio izany amin'ny fandraofana izany amin'ny tànana  ( fanadiovana ny loton'ny olona – tay sns..- amin'ny tànana).
Taorian'ny folo taona nanaovana fanentanana mba hanatsaràna ny rafi-panadiovana, dia nolanian'ny mpanao lalàna indiana ny Lalàna Mandràra ny fampiasàna mpanadio amin'ny Tànana sy ny Fanarenana azy ireo, melohina ny fampiharana ny fampiasàna olona tsy manao fitaovam-piarovana na fitaovam-panadiovana mba hanadio, hitondra, hamafa na haka ny tain'olona avy any anaty lava-piringa maina, lakandano tsy misarona, na lavaka sy làlandrano maloto .
Na izany aza, mbola manadio amin'ny tànana, tsy misy fitaovana fiarovana ihany ny mpiasan'ny BMC.
Taterin'i  Amol Lalzare, Naman'ny Video Volunteers Community sady mpitondra tuc-tuc any Mombai fa :
Tsy mikasika anay ry zareo satria maloto ny tànanay sy ny tongotray. Lazainy fa maimbo izahay. Mikitakita anay ry zareo, midaroka anay, mandroaka anay.
Tsaroan'i Nana Kale ny nahazo azy taorian'ny nanadiovany ny lakandrano maloton'i Mombai mialohan'ny fihavian'ny talio. Nandeha efa ho 500 kilaometatra izy niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany vavy roa taona mba hiasa hanadio ilay tanàn-dehibe midadasika mba harovana amin'ny tondradrano an'i Mombai.
Nampiasain'ireo mpiantok'asan'ny BMC i Kale, mitsoboka any amin'ireo lakandrano maloton'i Mombai izy, tsy misy tampim-bava, tsy misy aron-tànana, kiraro na akanjo fiarovana. Mandroaka plastika sy zavatra mafy tsapain-tànana, manala ny fasika manentsina ao amin'ireo làlandrano ireo amin'ny alàlan'ny lapela sy ny tànana izy. Manampy azy ny vadiny raha ny zanany vavy kosa milalao manodidina ny rano mainty maimbo, mifoka entona metàna mampidi-doza, amoniaka ary entona hafa.
Indray mandeha, nianjera tao anaty tatatra izy [ny zanako vavy]. Nanatrika teo ny mpampiasa, saingy tsy nanao na inona na inona izy. Niteny taminay izy mba hanala azy lavitra. Aiza no halehan'io zaza io ? hoy i Kale.
Tamin'ny volana Desambra 2016 dia namoaka lalàna ny mba handraisana ireo mpiasa mpanadio ampiasain'ny BMC ho mpiasa voafatotra amin'ny fifanarahana ny Fitsarana Avo tany Bombay :
Manana zo feno amin'ny tontolo iainana madio ny mponina an-tanàndehibe… Fa ao amin'ny firenena miahy ny vahoakany, ny fahadiovan'ny saranga iray amin'ireo mponina dia tsy azo tratrarina amin'ny alàlan'ny ‘fanandevozana’ ny hafa.
Ny BMC dia vondrona iray manambola be miandraikitra ny fahadiovan'ny tanàndehibe. miaraka amin'ny tetibola mihoatra ny 25.000 crore ropia indiana ( 3,8 lavitrisa dolara amerikana eo ho eo),  ka nahatonga ny olom-pirenena hanontany tena hoe nahoana izy no tsy afaka mikarakara tsara ireo izay manao io asa tena ilain'ny tanàna io. Apetrak'ireo mpikatroka mafana fo fa hamaivanin'ny BMC ny ain'ireo mpiasa mpanadio satria na ny saranga farany ambany indrindra amin'ny fiarahamonina no fiavian'izy ireo.
Araka ny angondrakitra omen'ny BMC dia 1386 ireo mpiasa mpanadio ny tontolo iainana 1386 no maty hatramin'ny 2009, ary mpiasa sivifolo no efa maty tamin'ity taona ity. Ny fikarohana dia mampiseho fa tena ambany, 52 taona  monja no fetram-pahavelomana ho an'izay manao karazana asa io.
Nilaza mazava tsara i Abdul Shaikh, mpiantok'asa niasa ho amin'ny fanadiovana, fa :
“Miresaka ny momba ny Swachh Bharat i Modiji. Fa te-hanontany an'ity governemanta ity aho, moa ve ny fahadiovan'ny làlana ihany no tena zava-dehibe ? Ahoana ny amin'ireo olona izay manao io asa io ?”
Hatramin'ny Oktobra 2016, nahangona mihoatra ny 90 lavitrisa Ropia Indiana tamin'ny alàlan'ny fampidirana hetra iray vaovao ny fanentanana Swachh Bharat na ‘ fanentanana Diovy i India’ izay eo ambany fiahian'ny Piraiminisitra Modi mba hamatsiana ilay hetsiny. Fa hatreto, tsy mbola miova ihany ny anjara ratsin'ireo mpiasa mpanadio lakandrano.
Naneho ny hatezerany tamin'ny BMC ny mponin'i Mombai noho ireo matin'ny tondradrano ary maro ireo zava-boalaza momba ny ‘ fanahin'i Mumbai ’ . Saingy raha mbola nifampiarahaba tao amin'ny haino aman-jery sosialy ny mponin'i Mombai noho ny hatsaran'ny fanahiny, dia alaivo sary an-tsaina i Anil 12 taona any anaty rano maloto hatreny am-balahana tontolo andro, mikarakara ny fahadiovan-dry zareo.
Tsy hoe entona mampidi-doza sy fotaka maimbo fotsiny no mamono ireo mpiasa mpifindra monina, fa ny avonavon'ny mponin'i Mombai izay manodina ny lohany tsy hijery ity loza amin'ny olona ity.
Video Volunteers no mitantana ilay hany tambajotram-baovao izay mifantoka manokana amin'ny fandrakofana ireo faritra tena mahantra, distrika tsy hitan'ny haino aman-jery mihitsy any India.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/14/107912/
 Navoaka voalohany : https://www.videovolunteers.org/the-unsung-heroes-of-the-2017-mumbai-flood/
 Brihanmumbai Municipal Corporation: https://en.wikipedia.org/wiki/Brihanmumbai_Municipal_Corporation
 tondradrano tany Mombai : https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Mumbai_flood
 nianjeran'ny trano avo be: https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/south-asia-floods-fears-death-toll-rise-india-pakistan-mumbai-building-collapses
 fangerena an-kalamanjàna.: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_defecation
 Dalita, : https://globalvoices.org/2015/07/14/the-consequences-of-indias-lack-of-toilets-go-beyond-hygiene/
 fandraofana izany amin'ny tànana: https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_scavenging
 alàna Mandràra ny fampiasàna mpanadio amin'ny Tànana sy ny Fanarenana azy ireo, : http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/252013.pdf
 Fitsarana Avo tany Bombay : http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/HC-Conservancy-workers-for-city-cant-be-enslaved/articleshow/56127133.cms
 vondrona iray manambola be miandraikitra ny fahadiovan'ny tanàndehibe. miaraka amin'ny tetibola mihoatra ny 25.000 crore ropia indiana ( 3,8 lavitrisa dolara amerikana eo ho eo),: http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/bmc-presents-budget-2017-18-its-down-from-last-year/articleshow/57891932.cms
 1386 ireo mpiasa mpanadio ny tontolo iainana 1386 no maty : http://www.bbc.com/news/business-35958730
 ary mpiasa sivifolo : https://scroll.in/article/849665/its-safer-being-a-soldier-fighting-in-kashmir-than-a-sewer-worker-what-does-that-say-about-india
 52 taona: https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other//articleshow/44030214.cms
 90 lavitrisa Ropia Indiana : http://twocircles.net/2016dec14/1481723504.html
 ireo matin'ny tondradrano : http://www.huffingtonpost.in/2017/08/31/mumbai-floods-dr-deepak-amarapurkar-fell-into-a-manhole-and-died-minutes-away-from-home_a_23191653/
 fanahin'i : http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-mumbai-helped-mumbai-during-its-worst-rain/the-spirit-of-mumbai/slideshow/60292755.cms